မလွဲသင့်သောအတွေးတစ်ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မလွဲသင့်သောအတွေးတစ်ချက်	19
- •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Sep 17, 2016 in Creative Writing, Think Different | 19 comments
ကျူးလွန်သူကာယကံရှင်တွေကတော့ အချစ်ကြောင့်လို့ လွှဲချတတ်ကြတယ်။
အိမ်ထာင်သည်ေယာက်ျားဘက်က တည်ငြိမ်အေးဆေးပါလျက်မိန်းကလေးတွေဘက်က စတင်ဆွဲဆောင်ကာ ဖောက်ပြားကြခြင်းတွေများသလို၊
အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတွေက စဆွဲဆောင်လို့ နှလုံးသားကျွံဝင်ပြီး အရှက်ကွဲကြရတဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်။
ဘယ်ဘက်ကပဲ စကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေ စိတ်ဆင်းရဲသောကကြီးစွာဖြစ်ရတာက အိမ်ထောင်သည်ရဲ့ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေပါ။
ဇနီးဖြစ်သူမှာတော့ အရှက်ရခြင်းထက် ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆုံးရှုံးရလေခြင်းဆိုတဲ့ သောကနဲ့ သားသမီးတွေမျက်နှာငယ်မယ့် မဖူလုံမယ့်အရေး၊ဖခင်ဆိုတဲ့အရံတံတိုင်းကြီးပျောက်ဆုံးမယ့်ိစုးရိမ်မှုအရေးက ပိုတတ်ကြပါတယ်။
စိတ်နှလုံးသားက ယိမ်းယိုင်သည့်တိုင် မိသားစုဗာရီယ၊မိရိုးဖလာဓလေ့အစရှိတဲ့ ခြိမ်ြးေုခာက်မှုတွေကြောင့် လက်မလွန်ခင် ချွန်းအုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါ့ထက် မြန်မာ့ဓလေ့အရ အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတွေကို ကျူးလွန်လိုစိတ်နည်းပါးကြတာလည်းပါပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်အနေနဲ့ကတော့ အင်တာနက်လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေမှတဆင့် အိမ်ထောင်သည် ၊ အပျိုလူပျို မခွဲခြားပဲ ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းရ လွယ်ကူလာတာတွေကြောင့် ဖောက်ပြားမှုတွေပိုဖြစ်လာကြပါတယ်။
မမြင်ကွယ်ရာနေရာ စာတိုတွေမှတဆင့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးသာယာလွန်ကျူးလာကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ မိမိတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်လိုစိတ်ကို အချစ်ဟု အမည်တပ်ထားသူတွေဘက်ကလည်း နှလုံးသားဆိုတာ အချိန် နေရာ လူမရွေး ညွတ်နူးသာယာတတ်တဲ့သဘောရှိတာမှန်ပေမယ့်
မိမိတို့သားသမီးတွေ အဖေရင်း၊အမေရင်းစုံလင်စွာမနေရမယ့်အခြေအနေကို တွေးမြင်ယောင်ပြီး ခဏတာပျော်ရွှင်မှုကို ဖျောက်နိုင်သလောက် ဖျောက်ကြသင့်ပါတယ်။
About •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ has written 60 post in this Website..
လူအချင်းချင်းမိတ်ဖက်ခြင်းတွင်၊ကိုယ်စိတ်ရွှင်သာ ကြင်နာပါမှ၊နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ချမ်းမြေ့တတ်၏။
View all posts by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ →	Blog
kai says: ယောကျာ်းက.. ချမ်းသာတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူးတဲ့..။
မိန်းမက.. ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူးတဲ့..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဆင်းရဲတာ ချမ်းသာတာမပါပဲ နှလုံးသားဆိုတဲ့ခေါင်စဉ်အောက်ကျွံဝင်မိတကြတာတွေလည်းရှိတယ်။အထူးသဖြင့် လူမှုကွန်ယက်တွေက ပိုအထောက်အကူပြုနေတယ်။အခုတလော တော်တော်မျများများ အိမ်ထောင်ရေးပြဿ နာတွေရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။တစ်ချို့က အချစ်မျက်ကန်းဆိုသလို အင်္ဂလန်မှာကျောင်းတက်လာတဲ့အပျိုမမက လှိုင်သာယာက ပန်းရံဆရာကလေးအဖေကို ခွဲမရ၊ပြုမရ၊တားမရ၊ဆီးမရ လည်းကြားရရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14449
kai says: အသက်ပြည့်ကြတယ်ဆိုရင်တော့.. နှလုံးဟားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက.. (တချိန်ကျ) မှန်ချင်လည်းမှန်နေတတ်တာပဲ..။ ဤဒွန္ဒယာကြီးကား.. ဘာမှအတတ်ပြော၍မရ..။
ဥပဒေအရကတော့.. အိမ်ထောင်ရှင်ဟာ.. ဟိုမှာဒီမှာဖက် ကိစ္စပြီးပြတ်ပြီးသလားကြည့်ရ..ကြည့်ယုံသာပါပဲ..။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အသက်ကြီးကြီး၊ရုပ်ကြမ်းကြမ်း၊ကျူးကျော်ရပ်ကွက်က ကလေး၃ယောက်အဖေ၊လက်ရှိအိမ်ထောင်ပေါင်းဆဲဆိုတော့ အကွက်ကျကျလုပ်ကြံဖို့လို့သာပဲသတ်မှတ်မိတယ်။
တစ်ဖက်ကတော့ အချစ် ဆိုတဲ့ခေါင်စဉ်အောက်ဘာမှမမြင်နိုင်။
ကာယကံရှင်ရဲ့အမျိုးတယောက်ကလာငြီးပြလို့ လူမှုကွန်ယက်ဇာတ်လမ်းတွေပေါ့ ကြောက်စရာ Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: ချမ်းသာခြင်း
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14449
kai says: ယူထားကြပြီးမှ.. တကျက်ကျက်.. နေ့တိုင်းစိတ်ညစ်နေကြရတာနဲ့စာရင်.. အချိန်မနှောင်းကြခင်(အရွယ်တွေရှိတုံး) .. ကိုယ်လမ်းကိုယ်လျှောက်တာ ၂ဖက်လုံးအတွက်.. ပိုမကောင်းလားလို့လည်း.. တွေးမိတယ်..။
ယောကျာ်းက လွှမ်းမိုးတဲ့ မြန်မာ့ဓလေ့မှာ.. မြန်မာမိန်းမတွေ ပိုသတ္တိရှိကြစေချင်တယ်..။
မြန်မာလူမျိုး၊ မူလဗီဇက.. လိင်ကိစ္စ..တက်မက်မှုနည်းပါတယ်..။
ဘ၀ကြင်ဖော်ဆိုပြီး.. အပြန်အလှန်.. သစ္စာရှိတာများပါတယ်..။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အဲ့ဒါတော့သူကြီးလွဲပြီ။
ဒီလိုအွန်လိုင်းဇာတ်လမ်းတွေကမွှန်တုန်းခဏပဲ။ကောက်ရိုးမီးလို ဟုန်းခနဲဆုံးဖြတဟုန်းခနဲဆုံးဖြတ်မိကြပေမယ့် သွေးအေးသွားတဲ့အခါ စိတ်ပျက်စရာကစိတ်ပျက်စရာက္စတွေပါ။အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်သားသမီးအပေါ်တစ်သက်လုံးနောင်တရပြီ။ အနောက်ကလူနေမှု၊စိတ်ခံစားချက်၊တွေးခေါ်ပုံနဲ့လုံးဝခြားနားတယ်လေ။
Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ကိုမင်းခန့်ကျော် မျိုးရိုးဗီဇကိုချည့်လွှဲချလို့လဲမရဘူးဗျ။ဒါမျိုးက typing နဲ့ဆွဲဆောင်ကောင်းရင်တောင် အဖြူထည်တောင်အရောင်ပျက်တတ်တာမျိုးပါ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စပ်မှန်းသိပေမယ့် ငရုတ်သီးစားသလို
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: နှလုံးသားဆိုတာ တယ်လဲအထိခိုက်မခံသကိုး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: တော်ကီအောက်ကခံစားချက်များပေါ့လေးလေးပေါက်ရေ :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1163
hmee says: ကိုယ့်တာကို လုံအောင်လုပ်ကြရမှာပဲ။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မထင်မှတ်တဲ့လူတွေပါ မထင်မှတ်စရာဖြစ်လောက်အောင်လွယ်နေတဲ့အိုင်တီခေတ်ပေကိုးမွမှီရေ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခုဆို မထင်ထားတဲ့ နေရာတွေကပါ ကြားရတာ။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဇာတ်လမ်းတွေထက်တောင်ဆန်းကျယ်ပါရဲ့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12162
Thint Aye Yeik says: အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှု ဆိုတာကြီးက ကြားရတာကိုက ရှက်စရာကြီးပါလေ…။
အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ကြတဲ့ ယောကျာ်း မိန်းမတွေကို မြင်မိရင်
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်နဲ့ အနှစ် သုံးဆယ်ကျော်တဲ့အထိ… (တကျက်ကျက် ရန်ဖြစ်နေလျှက်က)
မကွဲမကွာ…နေလာကြတဲ့ ကျနော့်အဖေနဲ့အမေကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ .ရှေးလူကြီးတွေက… အခု လူငယ်တွေထက် ပို စည်း စောင့်နိုင်ကြသလိုပဲနော်..။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: နည်းပညာရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကလဲ လူတွေကို အလွယ်ဖောက်ပြန်စေသွားတယ်။မမြင်ကွယ်ရာလိုဖြစ်နေတယ်မို့လား။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 42
A mar nyo says: အခုခေတ်ကလည်း အင်တာနက်ကချစ်ကြပြီး အိမ်ထောင်ရှိမှန်းသိလည်း ဇွတ်တိုးနေကြတာတွေဆိုတော့
မျက်မြင်ပဲကျောင်းဆရာမဆိုပြီး အင်တာနက်ကနေအိမ်ထောင်ရှင်ကလေးအဖေနဲ့ ကြိုက်နေတာ တွေးမိတာလေးကတော့ ဒီလိုဆရာမက ကျောင်းသားတွေကို အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုများသင်ကြားမလဲလို့
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဟုတ်ကဲ့ အခုနောက်ပိုင်းကြားလိုက်သမျှ အွန်လိုင်းဇာတ်လမ်းတွေချည့်ဖြစ်နေတယ်
Comments By Postကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - ko six - Thint Aye Yeik"ေ ကာက်ရိုးမီး" - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - ကိုပေါက်(မန္တလေး)ရေတွေကနိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာကိုစီးဆင်းနေတဲ့နေရာ - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်ခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပိုးနိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် အချက် (၁၅) ချက် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - kai - kaiMarijuana - ဆေးခြောက် - kai - ဇီဇီစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၃)- အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့် - Thint Aye Yeik - ko six''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - ဇီဇီကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၈ ဦး - ko six - သျှားသက်မာန်သူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဖွင့်မရတဲ့ ဦးနှောက် - ko six - ko sixချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - ဇီဇီ - ၀င့်ပြုံးမြင့်ဘီယာသောက်တဲ့ ပုဇွန် - ဇီဇီ - ဇီဇီThe Sense of Traveling - ဇီဇီ - လုံမလေးမွန်မွန်ဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ် - Thint Aye Yeikစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၂)-NEO-CLASSICISM တွေ ထွက်ခဲ့ဟေ့ - Thint Aye Yeik - ၀င့်ပြုံးမြင့်ကဗျာလေး မူးနေပြီ - ၀င့်ပြုံးမြင့် - ၀င့်ပြုံးမြင့်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့် ၂၁ရာစု၏တိုးတက်လာသော အသုံးဝင်နည်းပညာများ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye YeikPromotion လေးတွေလာပါပြီ............................... - Thint Aye Yeikလေကြောင်းခရီးသွားသည့်အခါ တစ်ကိုယ်ရေးသုံး Liquid-Gel-Spray ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုသယ်ဆောင်သွားမလဲ ? ? ? - Thint Aye Yeikအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Thint Aye Yeikပြည်ပခရီးသွားများ၏မျက်စိကျ လည်ပတ်ဖွယ်ဖြစ်လာသည့် မြန်မာ - Thint Aye Yeikအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Thint Aye Yeikချိုသာခွန်းဆက်, နှုတ်ဆက်ကြလျှင် - manawphyulay - aye.kkယာဉ်အို စက်ဟောင်း ထိန်းမောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် - kai - manawphyulay​မွေး​နေ့ဆိုတာ - manawphyulay - Thint Aye Yeikကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - etone - သျှားသက်မာန်အဝင်ကော - ko six - Thint Aye Yeikကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik၀မ်း ဗိုက် ပြားချက်နေဖို့ မနက်ခင်း တိုင်းစားပေးသင့်တဲ့ အရာ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikထူးမြတ်သောသွေးလှူခြင်း - aye.kk - etoneCategory	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10alinsett (95623 Kyats )Anzartone (95532 Kyats )kyeemite (91703 Kyats )weiwei (83114 Kyats )SP (80986 Kyats )padonmar (76894 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59014 Kyats )monmon (58594 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB